Mhinduro kuKutenda neSainzi Series - Rabbi Michael Avraham
Mhinduro kuKutenda neSainzi Series
Responsa > Category: Kutenda > Mhinduro kuKutenda neSainzi Series
P. Yakabvunzwa makore matatu apfuura
Shalom Harav muchirevo chechinyorwa chesainzi uye kutenda icho rabhi akanyora mukatiynet Rabhi akashandisa Mukuona kwephysico-theological
Mubvunzo wangu ndewokuti: kune zvakanakisisa zvandinoziva pane kusava nechokwadi mune uchapupu uhwu, nokuti kutaura pamusoro pechikonzero chekutanga kutaura pamusoro pemamiriro ezvinhu ari mberi kwechokwadi uye mamiriro ezvinhu aya haana kuzvipira kumutemo wezvokwadi yedu .. saka ini nzwisisa kuti hausi humbowo
Ndinoda mhinduro ndatenda.
Michi Vashandi Akapindura 4 years ago
Kana ndanzwisisa mubvunzo wako nemazvo, urikubvunza kuti chii chikonzero chekufunga kuti chirevo chechikonzero chiri chokwadi chechokwadi chedu chaive chokwadi nyika isati yasikwa (nekuti nesimba rayo takaratidza kuti yakasikwa nevamwe. chikonzero). Mhinduro yangu ndeyokuti musimboti wekukonzeresa haufanire kunge uri dunhu renguva, asi pamwe remhando dzezvinhu. Izvo zvinhu zvinozivikanwa kwatiri kubva pasirese hazvisi izvo zvakakonzeresa asi zvakasikwa nechimwe chinhu / mumwe munhu, saka musimboti wekukonzeresa pamusoro pavo. Zvimwe zvinhu zvingasada chikonzero. Zvinhu zviri munyika yedu zvakasikwa mukusikwa, uye kwavari mutemo we causality unoshanda zvisinei nenguva. Kupfuura izvozvo, kunyangwe munyika yedu musimboti wekukonzeresa hausi mugumisiro wekutarisa kuri nyore asi fungidziro yekutanga. Saka hapana chinotadzisa kuishandisa kune mamwe mamiriro / nguva zvakare.
P. Akapindura makore 4 apfuura
Kubva pachikamu chechipiri chemhinduro ndinonzwisisa kuti chinhu chekutanga (kureva kuti zvinoenderana nekuziva) uye ichokwadi pamberi pekuziva kwevanhu ..
Ndiko kuti, zvese zvinoenderana nekuziva kwevanhu zvinosanganisirwa mucausality uye asi zvese zviri pamberi hazvibatanidzwe mucausality.
Maererano neizvi handinzwisisi uchapupu.
Michi Vashandi	Akapindura makore 4 apfuura
Zvakandiomera kuti tikurukure nguva dzakadai. Hauna kundinzwisisa zvakanaka. Ini handisi kupokana kuti musimboti wekukonzeresa ndeye subjective. Kupokana kwangu ndekwekuti ivavariro, asi ine chekuita nezvinhu muchiitiko chedu uye kwete zvimwe zvinhu. Asi pamusoro pezvinhu izvo muchiitiko chedu ndezvechokwadi kushanda kunyange munhu asati avapo uye nyika isati yasikwa (kana kuti: pamusoro penguva yekusika pachayo). Zvandakataura ndezvokuti nheyo yechikonzero haibvi pakucherechedza asi kubva kune chikonzero chekutanga, asi haipokanise kuti inobata zvinhu zvenyama (izvo zvatinoona) uye kwete zvinhu zvose.
Shamwari dzake Akapindura makore 4 apfuura
Sekureva kwaRabhi hwaro hwake hunobva mukutarisa kwekunze kweiyo pfungwa yekukonzeresa kana chimwe chinhu chakadaro.
Saka ndiani akazvisika? 🙂
Shonra mufambi Akapindura makore 4 apfuura
Kana nyika yakasikwa saizvozvo pasina chikonzero, sei matambudziko akadaro asingaitiki kunyange nhasi?
Oops, ndakafamba pa keyboard zvakare ndikawana mhinduro.
Kwaziwai, Shunra Katolovsky